Teraka ve ireo mpandraharaha? | Martech Zone
Alatsinainy Martsa 28, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Jack Dorsey, mpanorina ny Twitter, miresaka momba ny fandraharahana. Nahafinaritra ahy ny valinteniny tamim-pahatsorana - tena tiany ny mahita sy mamaha olana, saingy nianatra ny ambiny amin'ny toetra ilaina amin'ny mpandraharaha amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny orinasany.
Manana fomba hafa kely amin'ny fandraharahana aho. Heveriko marina fa teraka tamin'ny talenta mpandraharaha ny olon-drehetra, fa ny ankamaroan'ny ray aman-drenintsika, mpampianatra, lehibentsika, namana ary na ny governemantantsika aza dia manimba ny fandraharahana. Ny tahotra no hany fahavalon'ny fandraharahana… ary ny tahotra dia zavatra nampianarina antsika sy naseho nandritra ny androm-piainantsika.
Ny tahotra no mahatonga ny mpanonta hamoaka boky mirakitra (sy ny olona toa azy Nikomy i Seth Godin). Ny tahotra no antony mahatonga ny sarimihetsika rehetra navoaka rehetra hamerenana ny sarimihetsika taloha izay nahomby. Ny tahotra no mahatonga ny fampisehoana zava-misy lafo vidy sy mahatsiravina nanenika ny lalan'ny fahitalavitra. Ny tahotra no mahatonga ny olona maro hiasa amin'ny asa ratsy tsy mahasambatra azy ireo… mino izy ireo fa ny fahombiazana no afa-tsy ary ny tsy fahombiazana no mahazatra. Io dia tsy. Anontanio ny olona manana ny orinasany ary ho hitanao ny ankamaroan'izy ireo maniry ny nahavita izany haingana kokoa ary maro amin'izy ireo no tsy hiverina intsony.
Mandreraka ny tahotra - na ny mpandraharaha aza. Fantatro ny namako vitsivitsy izay manana sary an-tsaina tsy mampino, fa ny tahotra kosa manakana azy ireo tsy hahita ny fahombiazany. Inona no manakana anao?